Indawo ephakathi ekuthiwa yi-101 BeachFront eneMbono neWiFi - I-Airbnb
Indawo ephakathi ekuthiwa yi-101 BeachFront eneMbono neWiFi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDaniela Vincenzo Skol Marbella
Yonwabela imozulu kunye nelanga laseCosta del Sol kwiflethi yethu kunye nendawo yayo engaqhelekanga.
Indawo engaselwandle kunye nokufikelela ngqo kwi-Marbella 's oceanide promenade. Ukuhamba imizuzu eyi-2 ukuya eParque de la Constitución kunye ne-10 ukuya kwidolophu endala yaseMarbella. Ecaleni kweevenkile zokutyela kunye neevenkile.
Indawo ethe cwaka, phambi nje kweMarbella yabantu abahamba ngeenyawo ngaselwandle ibe kufutshane neendlela zebhayisekile (iindawo eziqeshisa ngebhayisekile ezingqonge le ndawo) eza kukusa eGolden Mile nasePuerto Banús ngaselwandle oluhle.
Indawo yokuhlala enebhedi eyi-1.75 m nesofa, indawo yokujonga ulwandle, ikhitshi elixhotyisiweyo (umatshini wokuhlamba impahla uqukiwe) negumbi lokuhlambela (ihlamba, indlu yangasese kunye neshawa).
Umbuki zindwendwe ngu- Daniela Vincenzo Skol Marbella
Inombolo yomthetho: VTF/MA/11420